मन्त्रीको सुविधासहित डा. युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त Canada Nepal
मन्त्रीको सुविधासहित डा. युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त
क्यानाडानेपाल भाद्र ३० २०७७
काठमाडौं । सरकारले पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीको आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
मन्त्री बराबरको सुविधा हुने गरी उनलाई आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएकाे हाे । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरसमेत रहेका डा खतिवडा मनोनीत कोटाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै अर्थमन्त्री बनेका थिए । उनले अघिल्ला हप्ता अर्थमन्त्रीको पदावधि पूरा गरेका थिए ।
अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएको एक हप्तामै सरकारले प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतमा रहेर खतिवडाले अब अर्थमन्त्रालय चलाउने छन् ।
भाद्र ३०, २०७७ मंगलवार १८:४२:३७ बजे : प्रकाशित
# आर्थिक सल्लाहकार